Sidee loo kala sarreeyaa gooldhalinta Champions League? – CR7 oo meel sare taagan & Messi oo aan ka muuqan 10-ka sare! - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Sidee loo kala sarreeyaa gooldhalinta Champions League? – CR7 oo meel sare taagan & Messi oo aan ka muuqan 10-ka sare!
Caawa ayaa la ciyaaraya kulamada ugu horreeya lugta hore ee Wareegga 16-ka Koobka horyaalladda Yurub ee Champions League, waxaana halkaan idin kugu soo gudbinaynaa sida loo kala horreeya gooldhalinta Champions League.
Weeraryahanka kooxda Real Madrid ee Cristiano Ronaldo ayaa haatan hoggaaminaya gooldhalinta tartankan xiisaha leh ee UEFA Champions League, waxaana uu halka ugu sarreysa ku fadhiyaa 9 gool, isagoo sidoo kale hal caawin ka sameeyey tartankan.
Xiddigaha kale ee Neymar, Firmino, Kane, Cavani iyo Ben Yedder ayaa ku wada jira kaalinta labaad ee kala sarreynta gooldhalinta koobka horyaalladda Yurub ee Champions League, waxaana ay wadaagaan min 6 gool.
Dhinaca kale Weeraryahanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi oo ah kan ugu goolasha badan horyaalka La Ligaha Spain ayaa laga waayey liiska 10-ka sare ee hoggaaminaya gooldhalinta Champions League, maadaama uu saddex goo loo qura dhaliyey, isla markaana caawiyey hal gool oo kale Koobka horyaalladda Yurub xilli ciyaareedkan.
Haddaba halkaan hoose ka eeg sida loo kala hoggaaminayo Gooldhalinta Champions League xilli ciyaareedkan:-